Siyaasi Cali Guray oo ka hadlay Qaraarkii Maxkmada Sare ka soo saartay Ururada & Arimo kale. | Qaran News
Siyaasi Cali Guray oo ka hadlay Qaraarkii Maxkmada Sare ka soo saartay Ururada & Arimo kale.
Writen by Qaran News | 3:34 am 17th Jan, 2022
“URURADU WAY FURAN YIHIIN” KUMA FURMAAN EE WAXA LOO RAACAYAA XEER LAM. 14 2011 WAANA SIDAN SOO SOCOTA:
QAYBTA 4AAD: HABRAACA DIWAANGELINTA URURADA SIYAASADDA
Qodobka 4aad: Codsashada Diiwaangelinta iyo Qabashada Araajida
1. Guddidu (Guddida Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda Iyo Ansixinta Axsaabta Qaranka) waxay ku baahinaysaa warbaahinta dalka mudada qabashada codsiyada diiwaangelinta Ururada siyaasadeed, iyo mudada dhamaadka qabashada codsiyada diiwaangelinta. Mudada qabashada codsiyada diiwaangelintu waa laba bilood gudahood (lixdan maalmood) oo ka bilaabmaysa maalinta la bilaabo baahinta qabashada codsiyada
2. Urudada siyaasiga ah ee cusub waxay is ka diwaan galinayaan xarunta guud ee Gudida diwaan galinta ururada siyaasada iyo ansixinta asxsaabta qaranka ee Hargaysa.
d) Xisbiyada qaran ee haysata shahaadada xisbinimo lagama qaadayo cashuurta diwaan galinta.
r) Mudada liisanka ee xisbi qaran waa toban (10) sano oo ka bilaabma taariikhda liisanka la siiyay.
Qodobka 5aad: Xisbiyadda Qaran iyo Urarada ku meel-gaadh ka ah:
1. Markay dhamaato mudada qabashada araajida diiwaangelinta Ururrada, Gudiddu diwaangalinta ururada siyaasida iyo ansixinta Axsaabta Qaranku waxay hubinaysaa ururada buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, waxayna siinayaan ogolaansho ku meelgaadh ah oo uu ururkaasi ku hawlgalo.
2. Mudada hawl-galada ururada siyaasadeed waa 6 bilood oo ka bilaabanta taariikhda ogolaanshaha ku meel gaadhka ah la siiyey.
3. Xisbi/Urur kasta waa inuu ku keenaa mudada ku xusan Faqrada 2aad ee Qodobkan qoraalada iyo caddeymaha soo socda:
b. Qabashadii shirweynaha ee Ururka ama xisbiga, meeshii uu ku qabtey, taariikhii uu qabsoomay iyo wixii ugu weynaa ee ay qabteen, Sida liiska magacyada xubnaha golaha dhexe, Guddida Fulinta iyo magacyada hogaanka xisbiga.
8. Xisbi/urur kasta waa inuu xubin ka noqon karo qof kasta oo Somalilander ahi.
9. Ururka Siyaasadeed ee loo ansixiyo xisbi, kuma biiri karo xisbi kale doorashooyinka ka hor iyo ka dib, sidoo kale waa inay xeerkiisa ku cadaataa inaan laga saari Karin/eryi Karin xisbiga xubin ama xubno loo doortay Golayaasha Sharciga ah hadii aanay ka hor imanayn Xeerar ka dalka iyo xeerka xisbiga
Sidaa daraadeed ilaa hadda ma jiraan ururo siyaasadeed mana furna diiwaangelintoodu ee yaan dadka lagu wareerin wax aan jirin. Ciddii urur siyaasadeed in ay furato danaynaysaa xaq sharci ayay u leedahay hase yeeshee waa in ay u hogaansto Xeer Lam.14 2011